Ny marika 'havanana' ary ny paikady famandrihana drafitra stigma: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 4 Oktobra 2019	• 4 Comments
Andian-jiolahy mpamono môtô izay mampidi-doza izay mamono ny rehetra, Mocro Mafia, manafika ny Parool sy Telegraaf (farafaharatsiny tsy maintsy atao) ny sary mahatonga anay hino). 'Avy amin'ny Vondrona Eropeana sy manohitra ny fanatontoloana' mifanohitra amin'ny 'entona feno hatrany amin'ny afovoany'. Ireo deniers momba ny toetrandro mifanohitra amin'ny 'hiditra ao aminy ao anatin'ny 12 taona'. Nationalists hanoherana ny Islamisma. Ireo mpino media dia mifanohitra amin'ireo mpiampanga vaovao sandoka. Izahay dia vavolombelon'ny polarisezation sy ny fananganana marika natsangana tamin'ny alàlan'ny marketing lehibe. Ny marika ‘ankavanana’ dia mifandray amin'ny fanavakavahana, anti-Islam, vehivavy tsy tia namana, anti-GretaThumberg, anti-EU ary mino ny teha-piraisana tsikombakomba sy ny sisa. Ity dia kilalao eran-tany izay ifandraisan'ny marika ‘havanana’ miaraka amin'i Trump, Brexit Boris, Thierry Baudet, Marine LePen, sy ny sisa.
Amin'ny fampodiana azy ho marika, ny haino aman-jery dia manasokajy ny olona rehetra amin'ny fahitana azy 'ankavanana'. "Oh, ianao izany" toetr'andro denier "" na "Oh, ianao dia olona toy izany izay tsy mino ny lahateny ofisialy 911". Izany no antsoina hoe branding.
Ny haino aman-jery dia nandoro tsara ny marika 'havanana' tamin'ny alàlan'ny kirihitra toa an'i Thierry Baudet, Robert Jensen, George van Houts, sns. Manorina ny marika mazava tsara ho an'ny rehetra ianao ary avelanao hianjera ny toe-karena. Efa voalazako mialoha fa nandritra ny fotoana ela ary izany dia satria ny fihodinana avy amin'ny fiaraha-monina dia tsy maintsy mihodina. Izany no nahatonga ny ‘mety’ navela tao an-toerana nandritra ny fotoana fohy, satria tsy maintsy faritana mazava ilay marika, ka raha miakatra ny toe-karena dia tezitra ny olona rehetra io.
Ireo olona rehetra manana ny iray mampiavaka ny marika 'havanana' (natsangan'ny fampahalalam-baovao sy mpisehatra ambony any amin'ny politika), mandritra izany fotoana izany dia mitafy 'kintana jiosy' hita mazava tsara ny marika 'mety'. Io marika io dia ho foana raha toa ka ny tsy fahombiazan'ny zavatra rehetra azo apetraka an'io marika io. Aza adino fa ny tsy fahombiazana (izany fianjerana ara-toekarena) dia nalamina ary raikitra amin'ny fomba mirindra. Izany no antony nahatonga ny varotra ady an'i Trump ary noho izany ny deba Brexit. Izy io dia ela indrindra nomanina mialoha!
Ny marika ‘havanana’ dia tsy maintsy namboarina tamim-pitandremana ary avy eo nisondrotra avy eo, mba tsy hisy hanakiana intsony ny filaminana taloha ary ny tondrozotra mankany amin'ny fanatontoloana. Io vondrona io dia voaheloka sy meloka amin'izay rehetra miatrika fahombiazana. Izahay dia mitory fanentanana ara-barotra mivantana maneran-tany mba hiatrehana ny fitsikerana avy amin'ny fiaraha-monina. Raha mitsikera ianao dia 'mety' ianao ary tafiditra amin'io vondrona io ianao. Tsia! Io marika io dia naorin'ny media sy politika. Aza mandray anjara. Aza mianjera amin'ny harato fiarovana ara-politika izay manandrana mametraka anao ao anatin'io marika io. Aza mianjera amin'ny tongotra mifehy toa an'i Baudet sy Robert Jensen. Manalavitra lavitra amin'ny marika 'havanana' sy polarization!
Politika sy ny haino aman-jery milalao amin'ny ankapobeny. Tsy misy tratra intsony any aoriana. Tsara ny handre ireo traktera rehetra ao amin'ny The Hague amin'ity herinandro ity, fa milamina tsara sy voafehy ary voafehy avokoa izy rehetra. Ny tena fiovana dia avy amin'ny hoe tsy manome ara-dalàna amin'ny politika sy ny haino aman-jery fotsiny ary tsy hanome feo azy ireo.
Ny deba Forum momba ny demaokrasia (FvD) nambara mialoha
Moa ve ny Brenton Harrison Tarrant manafika ny fampidirana ny fampihorohoroana manohitra ny any amin'ny faritr'i Tiorkia?
Tags: tsy tia, Brexit, pananahana, Featured, fanatontoloana, ady varotra, Marka, pirenena, marina, vehivavy tsy manambady
Willem S nanoratra hoe:
4 Oktobra 2019 ao amin'ny 16: 06
Eo ankavia ny Fasisma Vaovao ..
5 Oktobra 2019 ao amin'ny 00: 22
Hevero fa tsara kokoa ny mino fa izao tontolo izao tsy dia ratsy araka ny filazantsika azy. Bangmakerij mitazona anay amin'ny trano kely.
Heveriko fa manao fihetsiketsehana isan'andro ny tantsaha azonao mora mandentika ny tany manontolo. Raha mijanona ny mandoa hetra miaraka amin'ny vondrona lehibe ianao, dia tsy afaka manao na inona na inona izy ireo. Mieritreritra ve ianao fa hitohy ny governemanta ao amin'ny The Hague? Mieritreritra ve i Wim Lex ka manapaka ny tadiny tsy voaloa? Tsy fantatrao tsara fa eo izy ireo satria mila izany isika rehetra ary mahalala azy ireo daholo. Ny bastards dia mimenomenona tontolo andro saingy rehefa tonga i Mark na i Wim Lex dia mijoro eo anoloany misy saina izy ireo.
Na dia mieritreritra aza isika fa mifoha dia mila manontany tena amin'ny tenantsika isika raha tsy voataona any ivelany ny saintsika.
Hitako ho tsara ny famaritan'ity lahatsoratra ity, tsy misy fahitalavitra, gazety, radio ary finday fa andro mahafinaritra ao anaty tontolo mahafinaritra izany
7 Oktobra 2019 ao amin'ny 10: 43
Ankehitriny mampifandray ny lohahevitra 5G amin'ny marika 'havanana' (elatra havanana) amin'ny alàlan'i Boris Johnson ary vetivety dia ho romotra ny tsikera:
7 Oktobra 2019 ao amin'ny 20: 58
Faran'ny fahalalahana miteny
Avelan'ny haino aman-jery anao ny mitelina puspin raha ilaina, fampielezan-kevitra faobe
Marina foana ny haino aman-jery, toa ilay pretra ao am-piangonana, miharatsy, jereo ilay sarimihetsika fohy eo ambany, ity isika izao
« Ny 'steniôma' deniers 'toetrandro dia mifamatotra amin'ny teha-tsikombakomba na mpitsikilo, havanana amin'ny lafiny havanana ary fahatsapana hozatra
Extinction Rebellion andiany mpikatroka voaloa »
Total visits: 12.938.349